သစ်နက်ဆူး: “ ပေါင်ချိန်ဆူး ”
Posted by သစ်နက်ဆူး at 9:17 AM
အတိုးကျန်လို့ပြန်ဝင်တဲ့ အချိန်ရောက်တော့ ညီမလဲခွိကနဲပဲ အဟီး
ငယ်ငယ်တုန်းကဆို ဒါမျိုးတွေ အရမ်းနားထောင် စာအုပ်တွေရှာဖတ်နဲ့ ..
အကို ကလေးသားလေးတဲ့... အဟား အဲဒီဖက်က အဲလိုပဲပြောကြတယ်နော်..။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၇နှစ်ကျော်လောက်က ညီမလေ အကြားအမြင်သွားတွက်ဖူးသေးတယ်။ အဲဒီမှာ ညီမက ကယ့်အလှည့်မရောက်သေးခင် လွယ်ထားတဲ့ အိတ်မှာ ပိုက်ဆံထုတ်ဖို့ ကြည့်လိုက်မိချိန်မှာ အိတ်ထဲမှာလေ ပုရွက်ဆိတ်တွေ အများကြီးပဲတွေ့တယ်။ စိတ်ထဲမှာ တမျိုးကြီးဖြစ်ပေမဲ့ အဲဒီအချိန်ထိ ကိုယ်တွေးတာက ငါ မိန်းကလေးဖြစ်ပီး တော်တော် ညစ်ပတ်တာပဲ အိမ်ရောက်မှ အိတ်လျှော်ရမယ်လို့တွေးတာ။ ဟိုက ဘာတွေ ဟောလဲတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး..။
ဒါပေမဲ့.. အိမ်လည်းပြန်ရောက်ရော အိတ်လျှော်မလို့ ကြည့်လိုက်တာ အဲဒီပုရွက်ဆိတ်တွေ မရှိတော့ဘူးးးး.
အဲဒါ ဘာဖြစ်တာလဲဟင် အကိုသိလား.. စိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်ကို စောင့်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က မကြိုက်ဘူးလို့ထင်မိတယ်..။
အဲလိုမျိုးက တကယ်ပဲလားးး ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ .. အိမ်ကိုပြောပြတော့ နောက်မသွားဖို့တားတယ်။ အမှန်ကနောက်တကြိမ် သွားထပ်စမ်းချင်သေးတာ..
မြတ်နိုး...ပုရွက်ဆိတ်တွေက ကိုယ့်ဘက်က မဟုတ်ဘူး...သူ့ ဘက်က...။
ဟီးဟီး ရီ၇တယ်။ လှေပွဲမနိုင်လို. စိတ်ညစ်နေတာ၊ အစ်ကိုရေးတာဖတ်ပြီး ပျော်သွားဘီ။
ဖြစ်ရမယ် ကိုသစ်ရေ့ ....
ဘုံဘ၀မှာ ကြုံရပါ-ဆိုတာ အဲတာမှ အစစ်ပဲဗျ....
စေတနာသန့်သန့်နဲ့ လူတွေအပေါ် ဆောင်ရွက်
သုံးဆယ့်တစ်ဘုံဝေနေယျလောကကြီးမှာ ကိုယ်မသိနိုင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ အမှန်ပါပဲနော်..။ သိပ္ပံနည်းနဲ့ကုသလို့မရနိုင်တာတွေဟာ ဝိဇ္ဖာနည်းတွေနဲ့ပျောက်ကင်းခဲ့တာတွေအများကြီး တွေဘူးခဲ့၊ ဖတ်ခဲ့ရဖူးတယ်။ ကျမကိုယ်တိုင် ပုဂ္ဂလပညတ်ကျမ်းကို နည်းနည်းလေ့လာခဲ့ဖူးတယ်..။ ဂျာနယ်ကျော်မမလေးရဲ့ ခက်ခဲ့တဲ့ရောဂါတွေကို ပုဂ္ဂလပညတ်နည်းနဲ့ ကုသနိုင်ခဲ့တာတွေကိုလည်း ဖတ်ခဲ့ရဖူးတော့ ထူးဆန်းတဲ့ ဝိဇ္ဖာနည်းတွေနဲ့ လူတွေကိုကုသပေးနိုင်တာကို စိတ်ဝင်စားတယ်..။
ကိုဆူး ပြောသလိုပဲ ရယ်ရခက်ခက်။ ဒါပေမယ့် ရယ်မိမှာပေါ့။
ထီပေါက်ချင်လို့ ဂဏာန်းလေး ၇လုံးလောက်ပေးပါလား...
ပေါက်ရင် တဝက်ပေးမယ်လေ... :P
ဒါမျိုးတွေ ကြားပဲ ကြားဖူးခဲ့တာ။ မကြုံဖူး၊ မမြင်ဖူး ခဲ့ဘူး။ ကိုဆူးရေးမှ ဒါမျိုးတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ ကိုဆူးကို ယုံကြည်တဲ့အတွက် ယုံပါတယ်။
တခါတလေတော့လဲ ကိုယ်တိုင် မြင်ဖူးချင်သား။ (ကိုယ့်ကိုယ်ထဲကို ၀င်ပူးတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ပရိသတ်အနေနဲ့ ကြုံဖူးချင်တာ ပြောတာ။ :)
အရေးအသား ကောင်းလွန်းလို့ (၂) ခေါက်ဖတ်သွားတယ်၊ ကောင်းတယ်ဗျာ။ စိတ်ကူးလေးတွေ
အင်း အမချိုသင်းပြောသလို သိပ္ပံနည်းအရ ဖြေရှင်းမရတဲ့ဟာမျိုးကို ကိုယ်တိုင်တော့ ဘေးက မြင်ဖူးချင်ရဲ့ ။ ကိုယ်တိုင်တော့ မကြုံဖူးချင်ပါဖူး အဟီး ။
ကိုဆူးက တကယ့်လိုင်းစုံပဲကိုး :)
ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်တွေကို လာဖတ်သွားတယ် ကိုဆူး။ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတယ်။
ဒီလိုတွေရှိတတ်တယ်ဆိုတာတော့ သိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကိုဆူးခင်ဗျာ အဲဒီလိုလူတွေက နေရာတိုင်းမှာ ပေါပေါများများရှိလား၊ တချို့အဖြစ်တွေက စိတ်စွဲလို့ဖြစ်တယ်လို့ထင်လို့ပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်က ဒီမှာ တောင်ကျော်အလုပ်သမားတွေနဲ့ ထိတွေ့နေတာဆိုတော့ တချို့ကိစ္စတွေမှာ သူတို့က တအားအယူသည်းနေကြတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ရိုးရာကိုင်တာတို့၊ ပြုစားတာတို့ စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ကျွန်တော်က သူတို့ရှိတာယုံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတွေယုံကြည်နေကြသလို ထစ်ကနဲရှိ ရိုးရာ၊ပြုစား အဲလိုထင်နေကြတာကို ဘ၀င်မကျတာပါခင်ဗျာ။ ကိုဆူးက နယ်ပယ်စုံကို ထဲထဲဝင်ဝင် သိလို့ မေးကြည့်တာပါခင်ဗျာ။
c box မှာမရေးချင်လို့..ဒီလောလောဆယ် post မှာရေးသွားပါတယ်..နံမည်ကိုတော့တွေ့ဘူးပါတယ်..တခါတခါရောက်တတ်တဲ့ blog တွေမှာ..ဒါပေမဲ့..ဒီblog ကို..အခုညမှစရောက်ပြီးစဖတ်ဘူးတာ..နေ့လည်က..သူငယ်ချင်း Dr. ကပြောလို့လေ..တကယ်ကို..စာရေးကောင်းပါတယ်..တကယ်တော့..ဘဝရဲ့အတွ့အကြုံတွေကြောင့်လို့ထင်တယ်..အနှစ်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်..စိတ်ဓါတ်ကိုလဲလေးစားလျှက်ပါ..ဒီနေ့တော့..november post တွေကုန်အောင်ဖတ်သွားပါတယ်..နောက်ရက်တွေ..မှာကျန်တာတွေလာဖတ်မယ်..မပြန်ခင်တော့.. post တိုင်း လာဖတ်ပါ့မယ်..ချီးကျုးပါတယ်နော်...ဒီနေရာကဘဲ..november post တွေအားလုံးအတွက်comment ရေးခဲ့ပါရစေ..အစစအရာရာအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်.
မင်းသားကြီး ဒူကဘာ အမြဲရောက်ဖြစ်တယ် အနုပညာမှော်အောင်တဲ့ ခင်ဗျားကို ပြောစရာဘာမှ မရှိလို့ကို ဘာမှမပြောပဲ ဖတ်ပြီးပြန်ပြန်သွားတာ အကြိမ်ကြိမ်ပါပဲ၊ ပြီးပြည့်စုံတယ်ပေါ့ဗျာ ခင်ဗျားပို့(စ်)တွေ ဖတ်ယင် ရွာကိုလွမ်း လွန်လွန်းလှ သဗျာ......စာပေ ရောင်းရင်းကြီး - ဒူကဘာ။
တကယ်သိချင်တာ။ ပြောပြပေးပါလား ။
မေးလ်လေးနဲ့။ မြတ်နိုးမေးလ်က ဘလော့လိပ်စာအတိုင်းပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၄နှစ်လောက်ကလဲ ကိုယ်အယင်ဘ၀က ဘယ်ဘ၀က လာလဲဆိုတာ ကို ညီမတယောက်ကဝင်ပီး
စမ်းချောင်းက ဦးသီလဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဆီမှာ သွားမေးဖူးသေးတယ်။
တခါမှ မျက်ဝါးထင်ထင်လဲ မမြင်ဖူးသလို ယုံလဲမယုံပေမဲ့..
တကယ်ဝင်လာတော့ အံ့တွေသြပီး ကျက်သေသေသွားတယ်။ ဘာတွေမေးရမှန်းလဲသိဘူး။ ၀င်ပေးတဲ့သူက ကိုယ့်ညီမဝမ်းကွဲဆိုတော့.. ဟီး သူ့ကြည့်ပီး ကိုယ့်မှာ ရီနေမိတာ..။
ယုံရမလို မယုံရမလိုနဲ့.. ရေးရင်းနဲ့တောင် ရီချင်တယ်။ အဟီး
ဒီနေ့မှ လင့်ခ်ကို ရတာပါ..။ သေချာ ပြန်ဖတ်သွားပါ့မယ်...။
လာဖတ်သွားပါတယ်ဗျာ တကယ်လားဗျာ ကောင်းကင်ပြာကြီးရဲ့ အောက်မှာ မဖြစ်နိုင်တာဆိုတာ မရှိပေမဲ့
မြန်မာ လူမျိုးတွေရဲ့ ယုံကြည်မှု့တွေထဲမှာ ဒါမျိုးတွေများနေတော့ ကျနော်တို့ တိုးတက်မှု့ရှာတဲ့ နေရာမှာ နှောင့်နှေးနေမှာ စိုးရိမ်တယ်ဗျာ